Saran-dalan’ny taksibe ho 500 Ar : hentitra ny ATT, midrikina ny UCTU | NewsMada
Saran-dalan’ny taksibe ho 500 Ar : hentitra ny ATT, midrikina ny UCTU
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny ATT sy ny UCTU momba ny hoe hampakarana ho 500 Ar. Ny saran-dalan’ny taksibe. Tsy ho tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo mpitatitra hahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana intsony ireo mpitatitra mampiakatra saran-dalana ho 500 Ar. Tsy hihemotra amin’ny fanapahan-kevitra koa ny UCTU.
Tsy nisorona ny tale jeneralin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT), ny Kly Rakotondrazaka Andry, omaly, nilaza fa hotapahina avy hatrany ny fanampiana ireo mpitatitra mampiakatra saran-dalana ho 500 Ar. Etsy andaniny, milaza ny tsy hihemotra amin’ny fanapahan-keviny ny UCTU fa hampiakatra ny saran-dalana ho 500 Ar.
“Tsy manara-dalàna io fanondrotana saran-dalana io” hoy ny ATT. Raha ny andinin-dalàna mifehy ny fitaterana an-tanety, tokony hatao peta-drindrina ao anaty fiara fitaterana mandritra ny 15 andro mialoha ny fisondrotan’ny saran-dalana izay vao azo ampiharina. Eo ny fampilazana hatao amin’ny an-tanan-tohatra maro tokony arahina. Betsaka ny fiara fitateram-bahoaka tsy mamaly ny filan’ny mpanjifa ary tsy manaraka ny bokin’andraikitra kanefa izy ireo indrindra no maika hanondrotra saran-dalana.
Efa hatramin’ny taona 2015 ny tetikasa ho fanampian’ny fanjakana ny mpitatitra tsy hiakaran’ny saran-dalana ho fitsinjovana ny vahoaka. Nohavaozina indray izany ny volana oktobra 2016 ka nampiharina ny volana novambra 2016 hatramin’ny avrily 2017. Tapaka tamin’izany fa amin’ny alalan’ny vidin-dasantsy izay alaina eny amin’ny tobin-tsolika no hahazoan’ny mpitatitra ny tamberim-bidy.
Efa nahazo karatra manokana hanaraha-maso izany solika alaina eny amin’ny tobin-dasantsy izany ny 81%-n’ireo mpitatitra. Tsy mbola mihatra kosa ny fampiasana izany satria mbola hisy aloha ny fampianarana ny fifehezana ny fampiasana izany.
Mandra-pahatonga ny fotoana hampiharana ny fampiasana io karatra io, mitohy ny fanampiana voafetra izay efa nahazatra.
Mikasika ny fahataran’ny fanampiana, nanazava ny talen’ny ATT fa ny mahatonga ny tsy fahatomombanan’ireo antontan-taratasy aterin’ireo mpitartitra ny fahataran’ny fandraisan’izy ireo izany. Eo koa anefa ny fandaminana eo amin’ireo tambajotram-pifandraisana handefasana ny vola fanampiana.
Tsy mitovy hevitra ireo mpitatitra
Tsy nitsitsy fitenenana koa ny talen’ny ATT amin’ity fampiakarana saran-dalana hataon’ny mpitatitra vitsy anisa ity. “Azo atao ny fampiakarana izany saingy atao manaraka ny lalàna sy mamaly ny filan’ny mpandeha ny tolotra omena azy”, hoy ny Kly Rakotondrazaka Andry.
Tsy tokony hifanerena kosa anefa fa samy manana ny safidiny ny mpitatitra. Tsy handefitra amin’ireo manao fandrahonana ny mpitatitra hafa ny ATT fa handray ny fepetra tandrify izany. Etsy andaniny, tsy mitovy hevitra koa ireo kaoperativa mpitatitra momba io fampiakarana saran-dalana io. Ao ireo tsy mankasitraka izany raha olom-bitsy kosa ireo miketrika ny hampiakatra ho 500 Ar.